Iyo Tech Mhedzisiro: Martech Ari Kuita Iyo Chaiyo Kupesana Nechinangwa Chayo Chinangwa | Martech Zone
Munyika umo tekinoroji yakagadzirirwa kuve yekuwedzera uye kuendesa mukana wehunyanzvi, yekushambadzira tech ine pamusoro pemakore, muchokwadi, ichiita zvakapesana chaizvo.
Takatarisana nezvakawanda zvemapuratifomu, maturusi, uye software yekusarudza kubva, iyo yekushambadzira nzvimbo yakanyanyisa kugadzikana uye yakaoma kupfuura nakare kose, netekiniki matura achiwedzera kuomesa nezuva. Ingotarisa kwete kumberi kupfuura Gartner's Magic Quadrants kana Forrester's Wave mishumo; huwandu hwehunyanzvi hunowanikwa kumusika wanhasi hauperi. Mapoka anowanzo shandisa nguva yawo achiita basa nezvebasa, uye mari inofanirwa kunge ichienda kumakambani iri kushandiswa pazvinhu zvisina basa - uye kazhinji zvine hunyanzvi - mashandiro.
In rapfuura kudzidza, Sirkin Research yakaongorora pamusoro pevashambadzi mazana mana emabasa akasiyana uye nehukuru mukuyedza kunzwisisa kuti chii chiri kudzosera shure martech. Ongororo yakabvunza zvakapusa:
Ko yako yazvino martech mhinduro inogadziriswa inogonesa?
Zvinoshamisa kuti. chete 24% yevatengesi vakati hongu. Vapinduri vakapindura vakataura zvinotevera nekuda kwezvikonzero:
68% vakati stack yavo haigone kuvabatsira kuenzanisa zviwanikwa (vanhu nebhajeti) kuchirongwa
53% yakati stack yavo inoita kuti zvive zvakaoma kuronga kushambadzira (makwikwi, zvemukati, uye zvekugadzira) kumatimu ese, tekinoroji, uye nzira dzekuita zvakanaka
48% vakati stack yavo haina kusanganiswa
Uye iri kuita chaiyo, yakaipa maitiro:
24% chete ndivo vanoti stack yavo inobatsira kusimbisa uye nekuzivisa mushandirapamwe zvakanaka
Chete 23% vanoti stack yavo inokwanisa kutyaira kusabatana pamaturusi
Chete 34% vanoti stack yavo inovabatsira kugadzira, kutonga, kuchengeta uye kugovana zvemukati zvemidziyo mushe
Saka, nei ikozvino martech mhinduro dzisiri kusangana nezvinodiwa zvezvikwata zvekushambadzira?
Ichokwadi ndechekuti maturatiki maturusi akave akagadzirwa zvakanyanya senge mhinduro mhinduro - kazhinji ichienderana neazvino kushambadzira maitiro kana "chiteshi chevhiki" - kugadzirisa kweumwe kurwadziwa, kupokana, kana kushandisa kesi. Uye nekufamba kwenguva, sezvo maturusi aya akachinja, ave boxed vashambadziri mukuburitsa RFPs, kuongorora vatengesi, uye kutenga imwechete chikamu mhinduro. Mienzaniso:
Chikwata chedu chinoda kugadzira uye kutsikisa zvemukati - tinoda yemukati yekutengesa chikuva.
Zvakanaka, ikozvino zvataita mashandiro edu ekugadzira, ngatipei mari mubhizinesi redhijitari asset maneja kuti tigadzire zvemukati zvekugovana uye kushandisa zvakare
Nehurombo, mukushandisa chaiko-kwehupenyu, maturusi aya anopedzisira ave kunyanya-kudyarwa, kutorwa-pasi, uye kuendeswa mukuparadzaniswa kwakazara. Zvishandiso zvakagadzirirwa zvinotengwa zvikwata zvine hunyanzvi. Mhinduro dzinogara musiri, dzakatemwa kubva kune yakakura, yakakura nzira. Chikamu chimwe nechimwe che software chine seti yaro yemapina, vakwikwidzi, uye vashandisi vemasimba, iine akapatsanuka mafashama akagadzirirwa kunyanya chishandiso (uye icho chete chishandiso). Uye ivo imba imwe neimwe yavo yavo seti yedhata.
Pakupedzisira, zvinoshanduka kuita kwakakosha kushanda uye chinetso chekuita (tisingataure chakakomba spike muTCO yeako CFO / CMO's software pamusoro). Muchidimbu: vashambadzi havana kugadzirirwa mhinduro yepakati iyo inopa simba timu yavo kunyatso kuronga kushambadzira.
Kurongedza kushambadzira kunoda kudzikisira iyo yechinyakare-chikoro mafungiro. Kwakave nemazuva apo vatungamiriri vekutengesa uye ekushambadzira zvikwata vanogona kuita mhinduro pamwe chete nekunamata, neimwe nzira, avo ese masisitimu anoenderana nemashiripiti. Aenda mazuva ekudyara mari mumapuratifomu enhaka ku tarisa bhokisi chete kuti timu yavo isatore zvizere uye vawane kukosha kubva kuchombo.
Asi, zvikwata zvinofanirwa kutora maonero akazara ezvekushambadzira - zvinosanganisira kuronga, kuita, kutonga, kugovera, uye kuyera - uye kuyedza mhinduro dzinobatsira kumagumo-kumagumo orchestration yekushambadzira. Ndeapi maturusi ari kushandiswa? Vanotaura sei kune mumwe nemumwe? Ivo vanobatsira kufambisa uye nekugonesa kuoneka kweruzivo, kumhanyisa kwemaitiro, kudzora zviwanikwa, uye kuyerwa kwedata?
Kugadzirisa matambudziko aya kunoda shanduko shanduko kushambadziro orchestration.
Mune chidzidzo chakataurwa pamusoro apa, 89% yevakabvunzwa vakati martech ichave inogonesa nzira panosvika gore ra2025. Iwo matekinoroji epakati akanyorwa seanonyanya kukanganisa? Predictive Analytics, AI / Muchina Kudzidza, Dynamic Kugadzira Kugadziridza, uye… Kushambadzira Orchestration.
Asi Chii Chinonzi Kushambadzira Orchestration?
Kusiyana neyakajairika manejimendi manejimendi, manejimendi ebasa, maturusi ekushandisa zviwanikwa, uye dzimwe mhinduro mhinduro, kushambadzira orchestration mapuratifomu ane chinangwa-chakavakirwa kune chaiwo matambudziko - uye maitiro - emasangano ekushambadzira. Heino muenzaniso:
Kushambadzira orchestration inzira ine hungwaru uye inoenderera, iyo inoona yega chikamu cheichi chiitiko chinoda kushanda.
Zvinobudirira, kushambadzira orchestration software inova iyo musha or uchishandisa maitiro (kureva sosi yezvokwadi) yezvikwata zvekushambadzira - panoitika basa rese. Uye sezvakakosha, inoshanda seyakabatana matishu pakati peakasiyana matekinoroji ekushambadzira, zvikwata zvekushambadzira, uye kushambadzira kwekufambiswa kwemabasa - kufambisa kuridzwa kune ese matunhu ekuronga mushandirapamwe, kuuraya, uye kuyera.
Nekuti zvikwata zvemazuva ano zvekushambadzira zvinoda tekinoroji yemazuva ano yekushambadzira. Software inounza akanakisa eese aya maturusi akapatsanurana pamwechete kuita chikuva chimwe (kana, kana zvirinani, zvine hungwaru inosangana neyakafara tech teki) kugadzirisa mashandiro pamwe nekuchinjisa zvemukati nedata rekuwedzera kuoneka, kutonga kwakawanda , uye kuyerwa kuri nani.
Welcome to Welcome...
Tinokugamuchirai Kushambadzira Orchestration Platform inoteedzana yema module emazuva ano, akabatanidzwa, uye ane chinangwa-chekubatsira kuronga kushambadzira. Inopa kuoneka kuronga zvine hungwaru uye kuenzanisa zviwanikwa, maturusi ekushandira pamwe nekuita kuti basa ribude nekukurumidza, hutongi kuchengetedza kutonga kwese kwese zviwanikwa zvekushambadzira, pamwe nekuziva kuyera basa rako.
Uye zvechokwadi, zvese zvinotsigirwa neiyo API yakasimba uye musika wekubatanidza une simba unosanganisira mazana emakodhi asina-kodhi - chimiro chinofungidzirwa chakagadzirirwa kupa kubatanidzwa kwakarongeka kwechikamu chega chega chekushambadzira.
Nekuti sekungofanana nemufundisi anoda baton kuti aronge mimhanzi yakawanda inoridza zviridzwa zvakasiyana, mushambadzi wekushambadzira anoda kuoneka uye kutonga pamidziyo yavo yese kugadzira kushambadzira.
Dzidza Zvakawanda Nezve Kugamuchirwa Kumbira Demo Rokutambira